Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay degmada Jamaame ee gobol... | Universal Somali TV
Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo la eegteen deegaano dhaca duleedka magaalada Kismaayo.
Goobaha la duqeeyay oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab, ayaa waxa ay hoostagaan degmada Jamaame, halkaasoo kamid ah Saldhigyada ugu waaweyn Shabaab ka joogaan Jubbada Hoose, ayna ka soo abaabulaan weerarada ka dhanka ah Ciidamadda Jubaland.
Saraakiil katirsan qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubaland, ayaa soo sheegaya in meelaha la beegsaday ay kamid tahay deegaanka Maara Muufo, halkaasna ay jirto khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab.
Duqeyntan, ayaa loo badinayaa iney geysteen diyaaradaha Mareykanka, kuwaasoo kor ka ilaashada Ciidamadooda ku sugan duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaasoo baratamaha Sanadkii hore lagu dilay Askari Ameerikaan ah, halka looga dhaawacay 4 kale.
Ciidamada Isbaheysanaya, ayaa maanta gudaha u galay deegaanka Koban eek u dhow Baar Sanguuni, iyadoo la wareegista kahor ay dhulka ka saareen 11 Miino oo ay Shabaab wadooyinka ku aaseen.
Kan-xigaRW Khayre oo gudoomiyay Shirka tubta ...
Kan-horeWasiir Beyle oo la kulmay Bella Bird ...
49,089,636 unique visits